का मेक्सिको देखि ल्याइएको हो के हेरौं
हामी यात्रा गर्दा निश्चित म हामी भ्रमण कि टाढा देशहरूमा केही घर ल्याउन चाहन्छु। यो स्मृति चिन्ह, राष्ट्रिय विशेषताहरु, र खाना हुन सक्छ। र खरिद यस प्रकारको एक विकल्प संग सम्झना छैन गर्न, हामी अब एक विशिष्ट मामला विचार र मेक्सिको देखि ल्याए के कुरा हुनेछ।
दुर्भाग्यवश, यो राम्रो तातो देशमा रूस हरेक नागरिक पुग्न मौका छ। सिद्धान्त मा, त्यहाँ एकदम किफायती छुट्टी छ - र रेस्टुरेन्ट सभ्य मूल्य र भाडामा सस्तो आवास, तर उडान एक धेरै मुद्रा मा हुनेछ। तर तपाईं अझै पनि गर्मी सुन्दर बगैंचा प्राप्त गर्न व्यवस्थापन भने, हामी तपाईंलाई छोटकरीमा यसको परम्परा थाह सिफारिस र तपाईं सधैं यो अविस्मरणीय छुट्टी को सम्झना गरिने स्मृति चिन्ह चयन गर्नुहोस्।
त्यसैले, कि मेक्सिको देखि आयात गर्दै खाना, पेय पदार्थ, वा सजावट: अक्सर? जवाफ सरल र, र अर्को, र तेस्रो हो। यो देशमा सबै मौलिक हाम्रो लागि सामान्य फरक छ, त्यसैले कुनै पनि यात्री जस्तो कुरा मा राख्न खुसी हुनेछ। लुगा देखि आभूषण गर्न - नियम, सबै कुराहरू बजारमा मेक्सिकोमा सेट छन्। र स्थानीय बजार को मुख्य आदर्श वाक्य - सम्झौता। त्यसैले, मेक्सिको बाट आयात गरिएका अधिकांश मानिसहरू, सुन्दर कुराहरू तिनीहरूलाई, मूल मूल्य सधैं अव्यावहारिक overstated किनभने vytorgovyuyut।
टोपी, एक sombrero र उज्ज्वल ponchos - यो तातो देश को मुख्य विशेषता राष्ट्रिय पोशाक हो। स्थानीय बजारमा, headdress 150 pesos लागि खरिद गर्न सकिन्छ, र एक poncho एक बिट अधिक महंगा खर्च हुनेछ - 200 250 गर्न pesos देखि। राम्रो कुरा peddling छन् जो भारतीयहरुलाई देखि खरिद गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले sundresses, राष्ट्रिय कढाई संग शर्ट, बेचन slacks नृत्य र कपडे। मेक्सिको देखि आयात गरिएका कुराहरू, तपाईं काम गर्न वा आफ्नो शहर मा एक पैदल लागि लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले राम्रो गुणस्तर द्वारा विशेषता र प्राकृतिक सामाग्री बनेको छन्।
निस्सन्देह, एक देश मा भन्ने क्यारेबियन सागर, जहाँ द्वारा धोए छ स्पेनको संस्कृति छ राम्ररी भारतीयहरुलाई, आभूषण, talismans र जादुई paraphernalia को किसिमहरु धेरै को मानिसहरूका को परम्परा संग intertwined। चाँदी कान को बाली अप तडक समयमा पर्यटकहरु र medallions प्राप्त प्राकृतिक पत्थर बनाइएका कंगन र छल्ले फिरोजा, agate, बिल्लौर, र अन्य गाढा ढुङ्गा encrusted। धेरै मानिसहरू त्यसपछि तिनीहरूलाई मेक्सिकोमा नातेदार र साथीहरूको उपहार रूपमा प्रस्तुत गर्न, यी कुराहरू खरिद।
सजावट को विषय जारी, छैन छुटेका र शिल्प मोती, को Huichol को शैली बनेको गर्न। यस्तो बुनाई प्रविधी पूर्व-Columbian समयमा यहाँ लोकप्रिय थियो। र आज, अजटेक गहने र आधुनिक प्रविधिहरू, मोती र bugles, तेजस्वी झुमके, कंगन र हार अनुगामी उत्पादन गर्न अनुमति जो आधारमा। को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले अनमोल, तर अद्वितीय छन्।
अब एक विशेष विषय - मेक्सिकोमा जूता। यसलाई चाँडै जो हाल को वर्ष मा आफ्नो अपमानजनक संसार स्तब्ध छ पुरुषहरु फैशन, गर्न आउँछ। लामो संग लाह र चमकदार जूता को पूर्ण नयाँ संग्रह सबै, औंलाहरुमा औंल्याए उकालो बाङ्गो। यस मामला मा जुत्ता को उचाइ एक मानक, एक साधारण पुरुष जुत्ता जस्तै हुन सक्छ, र गोडा पुग्न सक्दैन। अक्सर, यस्तो उत्पादन एक विशेषता रूपमा पर्यटकहरु द्वारा किनेको छ र विषय पार्टी मा एक अभियान को घटना मात्र सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, तपाईंले मेक्सिको आफ्नो बाटो tequila खरीद नगरी छोड्न सक्दैन। आखिर, यो देशमा यो सिद्ध गुणस्तर र उचित जोखिम उपलब्ध छ।
Marmaris, Pineta पार्क डिलक्स4* - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
वयस्क र बच्चाहरु को लागि स्लाइडहरू पानी
Kolyvan, को Altai क्षेत्र - जीवन्त छाप छोड्न भन्ने मूल छुट्टी
मियामी, फ्लोरिडा: आकर्षण, फोटो। मियामी, फ्लोरिडा मा बिदाहरू
सबैभन्दा सुन्दर पुल को प्राग। चार्ल्स ब्रिज: लिजेन्ड
Kizhi: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न। Kizhi, Valaam: यात्राहरु। Kizhi मा नाउ मा
सबै अवसरका लागि उत्पादन - ब्रोकोली धमाकेदार। क्यालोरी चमत्कार बन्दागोभी
कसरी निको पार्न र एक बच्चा मा colic रोक्न?
Lego को विविधता - आफ्नो बच्चाहरु खुशी पार्न ठूलो तरिका!
म निरन्तर सुत्न चाहन्छु भने, के गर्ने?
किन Apartments रानी र Kotelniki मा दावी छ?
पुरातन मिश्र। संस्कृति रहस्यमय सभ्यता
"प्याज आनन्द": समीक्षा। घरमा बढ्दै प्याज
बग - यो के हो?
पोर्टेबल ग्याँस हीटर: समीक्षा
परिदृश्य साँझ पुनर्मिलन
चिकन देखि व्यञ्जन एक किसिम
बच्चा मा Appendicitis: रोग को लक्षण र समसामयिक सहायता प्रदान महत्त्व